Anisan'ireo Amazon.com, Inc. androany, ny vidin'ny AMZN tahiry amin'ny aterineto izao, mizara ny vidin'ny Amazon.com, Inc..
AMZN = 2 792.75 US dolara
+15.3 USD (+0.55%)
Fanovana ny vidin'ny varotra hatramin'ny omaly
Ny fampahalalana momba ny fiovan'ny Amazon.com, Inc. ao amin'ny US dolara dia havaozina indray mandeha isan'andro. Ny vidin'ny stock stock dia manana sanda iray isan'andro. Fifanakalozana fifanakalozana amin'ny fifanakalozana amin'ny tsena crypto samihafa. 1 stock of Amazon.com, Inc. dia 2 792.75 stock of US dolara. 1 stock of Amazon.com, Inc. dia nanjary lafo kokoa ny 15.3 US dolara. Amazon.com, Inc. ny vidiny ankehitriny 2 792.75 stock of US dolara.
Amazon.com, Inc. ny lanjan'ny orinasan'ny orinasa US dolara
Telo volana lasa izay, ny vidin'ny Amazon.com, Inc. dia azo vidiana ho an'ny 3 372.43 US dolara. Enim-bolana lasa izay, ny Amazon.com, Inc. dia azo amidy amina 3 327.59 US dolara. Herintaona lasa izay, ny vidin'ny Amazon.com, Inc. dia azo vidiana ho an'ny 3 380 stock of US dolara. Ny saram-bolan'ny Amazon.com, Inc. ao amin'ny US dolara dia azo jerena ao amin'ny tabilao. Ny fanovana ny vidin'ny tahiry Amazon.com, Inc. ao amin'ny US dolara mandritra ny iray volana dia -17.47%. Ny fanovana ny vidin'ny tahiry Amazon.com, Inc. ao amin'ny US dolara mandritra ny herintaona dia ny -17.37%.
Stock quotes Amazon.com, Inc. US dolara
AMZN Ny US dolara (USD)
1 AMZN 2 792.75 US dolara
5 AMZN 13 963.75 US dolara
10 AMZN 27 927.50 US dolara
25 AMZN 69 818.75 US dolara
50 AMZN 139 637.50 US dolara
100 AMZN 279 275 US dolara
250 AMZN 698 187.50 US dolara
500 AMZN 1 396 375 US dolara
Raha manana ny taham-pianarana 10 ao amin'ny Amazon.com, Inc., dia ao amin'ny ny British Virgin Nosy izy ireo dia azo atakalo ho an'ny 27 927.50 US dolara. Mpanome teny fiovam-po izao dia manome ny 69 818.75 US dolara ho an'ny 25 stock of Amazon.com, Inc.. Ny fiovam-po an-tsena amin'izao fotoana izao ho an'ny 50 stock of Amazon.com, Inc. manome 139 637.50 US dolara. Azonao atao ny mifanakalo 279 275 US dolara ho an'ny 100 stock of Amazon.com, Inc.. Raha manana ny taham-pianarana 250 ao amin'ny Amazon.com, Inc., dia ao amin'ny ny British Virgin Nosy dia azo amidy amina 698 187.50 US dolara. Androany 1 396 375 USD = 500 stock of AMZN.
AMZN tantara momba ny vidin'ny stock
27/01/2022 2 792.750 USD 15.3 ↑
26/01/2022 2 777.450 USD -22.27 ↓
25/01/2022 2 799.720 USD -91.16 ↓
24/01/2022 2 890.880 USD 38.02 ↑
21/01/2022 2 852.860 USD -
Androany 500 stock of AMZN = 2 792.750 USD. 26 Janoary 2022, 1 stock amin'ny Amazon.com, Inc. = 2 777.450 US dolara. Amazon.com, Inc. in US dolara amin'ny 25 Janoary 2022 - 2 799.720 US dolara. Ny ambony indrindra Amazon.com, Inc. ao amin'ny US dolara vidiny ao amin'ny dia tao amin'ny 24/01/2022. Ny farafahakeliny Amazon.com, Inc. ao amin'ny US dolara ho an'ny volana farany dia ny 26/01/2022.
Anisan'ny Amazon.com, Inc. ny iray amin'izao fotoana izao amin'ny 2 792.75 $. Ny vidin'ny AMZN dia niova ho +0.55% na +15.3 USD hatramin'ny andro iraisam-barotra farany. Azonao atao ny mividy entana 100 Amazon.com, Inc. amin'ny 279 275 US dolara na mivarotra 50 isa amin'ny AMZN amin'ny 139 637.50 US dolara.
Amazon.com Inc. dia mpivarotra an-tserasera.Ny orinasa dia mivarotra ny vokatra ao amin'ny tranokala izay manome tolotra, toy ny tolotra dokam-barotra sy fifanarahana fifanarahana amin'ny carte de crédit.Manolotra fitaovana elektronika toy ny fitaovana elektronika toy izany koa izy ireo sy ny takelaka Fire.